Arsenal Oo Diyaarsatay Liis Ay Ku Jiraan 12 Tababare Xilli Ay Wali Raadinayaan Tababaraha Badali lahaa Unai Emery - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Arsenal Oo Diyaarsatay Liis Ay Ku Jiraan 12 Tababare Xilli Ay Wali Raadinayaan Tababaraha Badali lahaa Unai Emery
Kooxda Arsenal ayaa doonaysa in ay si deg-deg ah u hesho tababare cusub waxana ay diyaarsatay Liis ay ku jiraan 12 tababare oo ay kooxdu falanqayn doonto una dhaqaaqi doonto saxiixiisa.
Waxa ku jira tababaraha kooxda Leicester City ee Brendan Rodgers, tababarihii hore ee kooxda Tottenham ee Mauricio Pochettino, caawiyaha Kooxda Man City ee Mikel Arteta, Tababaraha Kooxda Wolves ee Nuno iyo tababarihii hore ee kooxda Juventus ee Max Allegri.
Pochettino ayaa laga yaabaa in uu iska diido Arsenal sabab la xidhiidha Tottenham Halka Rodgers lacag lagu bur-burin karo heshiiskiisa xilli ay sidoo kale ka cabsi qabaan in uu Arteta diido kadib markii ay iska diiday xagaagii hore.
Kooxda Arsenal ayaa doonaysa in ay 4 ilaa 5 todobaad ee soo socota ku helaan tabaabre xilli ay madaxda kooxdu haatanba qiimaynayso tababarayaasha hor yaala.
Tababaraha haatan ku meel gaadhka ku jooga kooxda ee Ljungberg ayaa sidoo kale ka mid ah Liiska tababarayaasha ka midka ah Liiska tababarayaasha ay kooxdu doonayso laakiin uma badna in uu si toos ah ula wareegi doono kooxda sabab la xidhiidha khibrad fiican oo uuna u lahayn tababarka inkasta oo qaab ciyaareed fiican oo ay kooxdu soo bandhigto wakhtiga soo socda ay keeni karto in ay maamulka Arsenal badalaan Go,aankooda.